Arsene Wenger” Arsenal Waa Nolosheyda’ - Jubbaland TV
Arsene Wenger” Arsenal Waa Nolosheyda’
By admin April 29, 2018 351
Arsene Wenger ayaa qirtay in isbuucyadii u danbeysay ee xirfadiisa kubada cagta ee Arsenal ay cadeyn u tahay waayo aragnimo shucuur ah sida kooxda “nolosheydeydii”.
Tababaraha Gunners ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay inuu ka tagayo Emirates Stadium dhamaadka xilli ciyaareedkaan ka dib 22 sanno oo door ah.
Wenger ayaa kormeeray 1,197 kulan oo uu u saftay Arsenal ilaa iyo haatan, iyadoo aan ka badneyn lix kulan oo xilli ciyaareedkan ah uu ka tagay xilli ciyaareedkan, tababarihii halyeeyga ayaa la dhibtoonaya inuu la yimaado qibrad.
“22 sano ayaan ku qaatay 1200 kulan ama wax sidaas oo kale ah ee Arsenal Football Club,” ayuu Wenger u sheegay Sky Sports News.
“Ma ahan 50, waa 1200 waana waqti walba oo aad kooxda u diyaarisid inaad kacsan tahay, waa qeyb ka mid ah noloshaada, waa wax ka badan noloshaada, waa noloshaada” Arsenal ayaa aheyd nolosheyda, sidaasi darteed waa wax gaar ah . ”
Wenger ayaa xaqiijiyay inuu qaadan doono muddo bil ah ka dib markii uu ka tagay kooxda si uu uga dhaadhiciyo inuu dhaqaaqo xiga.
The post Arsene Wenger” Arsenal Waa Nolosheyda’ appeared first on Wararka Ciyaaraha.
Chelsea oo soo bandhigtay qiimaha ay ku kansalayso hishiiska Cayaariyahan Koulibaly
Layvin Kurzawa oo ku biiri doona Midkood Naadiyada Manchester United, Tottenham iyo Chelsea
Kaddib Niyad Jabkii Kooxda City ee Tartanka Champions League, City oo qandaraas cusub ku abaal marinaysa
Hogaamiyaha xiga ee Chelsea oo lasii shaaciyay, kaas oo ah kan ugu sigaae cabka badan Serie A